JINGHPAW KASA: မန်ဆိုင်းတွင် ပြည်သူ့စစ်များတိုက်ခိုက်
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ တပ်မဟာ (၅) အောက် တပ်ရင်း (၂၄) နယ်မြေဖြစ်သော မန်ဆိုင်း ဘက်သို့ ထိုးစစ်ဆင်လာသော ဗမာအစိုးရ စစ်တပ် ခမရ (၃၂၀) တပ်များကို အောက်တိုဘာ (၁၇) ရက်မနက်၌ ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၂၄) လက်အောက်မှ ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့များ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဤတိုက်ပွဲတွင် ဗမာစစ်တပ်ဘက်မှ (၁) ဦး သေဆုံးကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
(1) Burmese soldier killed in Man Sai area, which is under KIA (24) battalion, KIA (5) brigade, Eastern State, according to the KIA front-line officer report. Burmese light infantry unit (320) invaded to the KIA controlled area of Man Sai on 17th October. Thus, KIA’s militia which is under KIA (24) battalion opened fire to prevent the regions.